Ireo harena voajanahary
Ahoana no ahafahana miaro azy ireny mba tsy ho lany tamingana?
Sarotra ny manao fanadihadina matetika rehefa ny fiarovana ny harena voajanahary no resahina indrindra moa fa ny mikaro-baovao momban’izany. Mba hahafahana manatanteraka ny asa ampahamendrehana, dia nisy ny fampiofanana mpanao gazety izay nokarakarain’ny Concervation Internatoinal eto Madagasikara, vatsian′ny USAID vola.
Nandritran’ny taona vitsivisty lasa izay dia hita fa gaboraraka ny fanondranana sy fanapotehana ny harena voajanahary. Manoloana izany tranga izany dia nanome fiofanana ny mpanao gazety mpikaroka ny vaovao mahakasika ny tontolo manodidina sy ny trangam-piarahamonina ny Conservation International, mba hanamafisana ny fahalalana sy ny fahaiza-manaon’ireo mpanao gazety ireo.
Mizara roa ny fiofanana ka ny adiany voalohany dia mifantoka amin’ny fahamendrehana sy fanajana ny fenitrin’ ny asa fanaovangazety izay notarihin’i RASAMOELINA Louis, mpampihofana natao ny erinandro roa nifanesy dia ny 14 aprily ka hatramin’ny 23 aprily lasa teo iny, izay nandraisan’ny mpanaogaety avy eny amin’ny faritra maro.
Fantatra ihany koa fa teratany vahiny manampahaizana amin’ny fanadihadina manokana momban’ny tontolo iainana no hiandraikitra ny fiofanana andiany faharoa izay ho tontosaina amin’ity volana may ity.
(33) Lantomalala SAHONDRANIRINA : 02-05-2014 - 18:00